“Villes des musiques du monde”: hisongadina manokana Rajery sy ny valiha | NewsMada
“Villes des musiques du monde”: hisongadina manokana Rajery sy ny valiha
Mpanakanto anisan’ireo manatanteraka fampisehoana matetika ivelan’i Madagasikara Rajery sy ny valihany. Saika voatetiny avokoa ny vazantany efatra. Fanohizany izany ny fanatrehana ny “Festival Villes des musiques du monde”.
Hotanterahina any Seine-Saint-Denis sy any Paris, ny 12 oktobra hatramin’ny 11 novambra izao, ny “Festival Villes des musiques du monde”. Araka izany anarany izany, manome sehatra ireo karazana mozika mampiavaka ny firenen-tsamihafa, avy amin’ny vazantany efatra, ity « festival » ity.
Amin’izao andiany faha-21 izao, hitodika manokana any amin’ny mozika mandrotsirotsy ny Nosy samihafa ny « Villes des musiques du monde » ary anisan’izany ny mozika malagasy. Haneho ny hakanton’ny gadona malagasy any Rajery. Azo lazaina fa hasongadina manokana mihitsy ny talentany amin’ny fitendrena valiha.
Maromaro ny fandaharam-potoana hiarahana amin’ity kintan’ny mozika malagasy ity. Anisan’izany ny fampisehoana indroa miantoana, ny zoma 19 oktobra ao amin’ny toerana antsoina hoe Maison du peuple. Ny ampitson’io kosa, ao amin’ny L’embarcadère ao Aubervilliers.
Mialoha ireo seho roa ireo, hisy ny fampahafantarana ny nahandro malagasy hotanterahin-dRajery, ao Aubervilliers ihany, ary iarahana amin’ny fikambanana antsoina hoe Maida pour tous. Ankoatra ny fampisehoana, hisy ny fotoana hampahafantarana manokana ny mahakasika ny lalana nodiavin-dRajery teo amin’ny tontolon’ny mozika.
Raha tsiahivina, misy horonantsary fanadihadiana iray, mitondra ny lohateny hoe “Le prince de la valiha”, notontosain’i Bertrand Guerry sy i Thibaut Ras. Halefa, mandritra ity “Festival Villes des musiques du monde” ity izy io, ny alahady 21 oktobra ary arahina seho sy fiaraha-misakafo. Tsy mitsahatra ny fitetezana firenena sy hetsika maro, any ivelany any, ataon-dRajery, efa volana maromaro izay.